७४ वर्षकी वृद्धाले गरिन् गोरुसँग बिहे, कारण सुन्दा सबै छक्क ! – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today १ बैशाख २०७८, 5:50 am
के तपाईंले कुनै महिलाले गोरुसँग बिहे गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तो विचित्र सुन्ने कुरै भएन । तर हालै एक ७४ वर्षकी महिलाले एउटा गोरुसँग बिहे गरेर सबैलाई अचम्ममा पारिन् । उनी अहिले दिनहुँ आफुले बिहे गरेको त्यो गाईको बाच्छोको हेरचाहमा लागिरहेकी छिन् ।